Stabiliser tsy misy poizina tsara indrindra ho an'ny orinasa sy mpanamboatra gasket PVC malefaka sy malefaka | Aimsea
Stabiliser tsy misy poizina ho an'ny gasket PVC malemy sy malefaka
Calizer Zinc tsy misy poizina ampiasaina amin'ny fitrandrahana plastika PVC mba hahitana ny fananganana sy ny fanamboarana, ny fiara mandeha, ny fampangatsiahana varotra, ny varavarankelin'ny fiara, ny an-dranomasina, ny fivarotana eo anoloana, ny ao anatiny sns sns. Miaraka amina loko sy karazana PVC izy ireo, ho an'ny semi henjana ary malefaka. Ny stabilizer dia manana fanoherana ambany ambany / avo lenta, fanoherana UV / Ozone tsara, fametahana famatrarana tsara, tanjaka tsara, tsy misy fofona ary tsara loko voalohany.
Mety amin'ny fitaovana pvc malefaka ， Malalaka ny tontolo iainana, tsy misy poizina, toy ny extrusion tsihy sy ny sisa, amin'ny alàlan'ny fitsapana SGS, mihaona amin'ny ROHS Eoropeana sy ny REACH Standard.
Loko voalohany tsara
Manolora fatra 2-4, ary ahamboaro araka ny tena famokarana.
ara-nofo PVC plasticizer stabilizer Calcium carbonate Lubricant anatiny Lubricant ivelany mpanome loko
mifandraika 100 40-60 2-4 40-60 0.2-0.5 0.4-0.6 mety
Ny data rehetra ao anatin'izany ny resipeo dia tena misy, ny mpanjifa dia tsy maintsy manamarina samirery raha mahasoa ny vokatra, raha mifanaraka sy mihatra amin'ny fenitra sy fitsipika momba ny fiarovana sy ny fahasalamana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny laboratoara sy ny fitaovany manokana hanaovana fitsapana ilaina. AIMSEA tsy afaka manome fanoloran-tena ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana sy fandaniana. Ny mpanjifa dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy ny lalàna momba ny patanty eo an-toerana.
Momba ny PVC
Nandritra ny am-polony taona maro, ny vokatra mangarahara PVC dia nizara ho henjana sy malefaka, izay nampiasaina tamin'ny fampiharana samihafa. Raha ny dinika misy ankehitriny momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny faharetana dia hiatrika fanamby lehibe ireo ampahan-tsena ho avy. Ireo vokatra misy Tiny, alternatives vahaolana tsy misy tin, dia ho lasa mitsikera be hatrany. Amin'io lafiny io dia ilaina ny mitandrina ny lalàna samihafa, toy ny pharmacopoeia, ny fankatoavana ny fifandraisana amin'ny sakafo, ny fitsipi-pitabatabana na ny fenitry ny kilalao. Taloha dia ny tin, ny firaka ary ny barium no tena ampiharina amin'ny fampiharana maro, fa noho ny Vondrona Eropeana tsy mampiasa afa-tsy zinc calcium sy barium zinc, ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia manaraka tsikelikely an'io fivoarana io ary misafidy ireo vahaolana ireo.
Tombony ho an'ny PVC
Sarimihetsika hentitra amin'ny fitsaboana
Jiro mangarahara afaka
Kilalao PVC mangarahara
Previous: Ca / Zn stabilizer mangarahara kilalao PVC sarimihetsika henjana sy fonosana vita amin'ny tanany
Manaraka: Mpiorina tsy misy poizina ara-tontolo iainana ho an'ny homogenika manohitra ny statika tsy mitovy amin'ny PVC
Stabilizers tsy misy poizina Pvc
Pvc Heat Stabilizer, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Stabilizer, Pvc Additives, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile,